पर्यावरण नारी पृष्ठ 3
को छाया लागू गर्न कसरी?
"आँखाहरु - प्राणको" को दर्पण - उनि भन्छन्। त्यसपछि भएकोले कस्मेटिक्स रूपमा यो acquires अर्को अर्थ भन्दै हाम्रो जीवन को अभिन्न भाग भएको छ। सबै पछि, खैर माथि गरे आँखा स्त्रीको र उनको मुड को चरित्र बारे धेरै बताउन सक्नुहुन्छ। छायाँ को किसिमहरु उनको थैली मा rummage सुरु र सामग्रीहरू वर्गीकरण गर्नु गर्न। छाया तर - यो saturated रंग साँझ रहनसहन लागि सिद्ध छन् कारण। तिनीहरूको मोम (पैनकेक) बनावट छाला राम्रो निहित, तर तपाईं छाया अन्तर्गत जग प्रयोग गर्छन् भने, तिनीहरूले रोल र छाला को Folds मा भेला। सुक्खा छाला प्रकार लागि उपयुक्त। गर्मी मा तर को छाया inevitably को सुन्दर मौसम मा, किनभने प्रासंगिक "प्रवाह"। एक राम्रो बोनस -। परेलिहरु moisturize र मौसम अवस्था गर्न जोखिम विरुद्ध सुरक्षा छाया बेक - प्रविधि आँटा गर्न एक, बनावट धेरै नरम र राम्रो धन्यवाद छ। दिन र साँझ रहनसहन लागि उपयुक्त -। सही एक सुक्खा ब्रश (उत्कृष्ट छायाँपारिएको) र गीला रूपमा लागू सुखा छाया (यो धातु चमक को प्रभाव बाहिर जान्छ) crisp Shadow - मैट र मोती पनि छन्। तिनीहरूले, धेरै आर्थिक छन् परिपक्व छाला राम्रो फिट, तर प्राइमर (को छाया लागि आधार) प्रयोग भने, अप्रिय सम्पत्ति crumble छ। तरल छायाँ - धेरै कारण संरचना गर्न स्थिर र चाँडै सुक्खामा गर्छन। यो cranky को प्रकारको, त्यसैले कसरी तरल छाया मात्र सक्षम पेशेवरों र सुंदरियों एक धेरै थोरै प्रतिशत लागू गर्न छ। छाया झिलमिलाहट सुन्दर छ, तर दुई घण्टा पछि मधुरो हुन्छन्। छायाँ sticks - छाडा र चिल्लो लागेको हो। जसको परिणामस्वरूप रंग अधिक प्राकृतिक र धनी देखिन्छ। सम्पूर्ण पटल छाया लागू गर्दा सानो छायाँपारिएको यस प्रकार, र चाँडै रोल। Eyeliner रूपमा राम्रो। मुख्य कुरा -!
आफ्नो हातमा थैली
तपाईं एक थैली सी अघि तपाईं कपडे छनौट गर्नुपर्छ। यो मास्टर वर्ग गर्मी सनी हैंडबैग र जीन्स लागि राम्रो अनुकूल छ जो गर्मी अवधि, लागि सिक्का लागि एउटा सानो खल्ती बनाउन प्रदान गर्दछ। मूल आफ्नै हातमा पर्स र Textured कपडा प्राप्त। हामी भित्री लागि सन र कपास बाहिरी छाँटो एक संयोजन प्रदान। अब कसरी एक थैली सी गर्न कदम निर्देशन गरेर चरण छलफल। 1। आफ्नो हातमा थैली सरल बान्की शुरुमै। हामी ऊतक को दुई प्रकार को दुई टुक्रा देखि काटे। आफ्नै हातमा एक थैली लागि योजनाहरु4भागहरु बना छ: मुख्य खल्ती थैली एक आयत जस्तै देखिन्छ। ऊतक प्रत्येक प्रकार को दुई टुक्रा लागि 21h10 सेमी को Kroim4विवरण आकार;
Pantenol - यो regenerative प्रक्रियाहरू stimulates र आउटडोर प्रयोग लागि हो भन्ने पदार्थ। केही जलाइएको छाला पछि समुद्रमा एक छुट्टी समयमा तर panthenol सामना र कपडा, यो त्वकरोग मा एक स्वागत मा अन्य पुनर्स्थापना तत्काल आवश्यक र अरूलाई आफ्नो साथीहरूबाट यो सिके, र तिनीहरूले समीक्षा रेभ र आफूलाई मा दबाइ प्रयास गर्ने निर्णय गर्दै। के patenol बचत देखि गरेको, हेरौं, र यो आफैलाई र असल परिवार प्रयोग गर्न सकिन्छ कसरी। यस तर panthenol र शरीर मा यसको प्रभाव pantothenic एसिड को एक derivative छ भिटामिन बी, - मुख्य सक्रिय घटक तर छ। छाला सम्पर्क, dexpanthenol बारी मा coenzyme एक अभिन्न भाग हो, र लिपिड संलग्न छ जो pantothenic एसिड, कार्बोहाइड्रेट प्रक्रियाहरू मा साथै, छाला, श्लेम लाग्एको झिल्ली को पुनर्जनन तेजी को Collagen फाइबर सानो पार्नु र सामान्यीकरण गर्न सक्छन् भनेर acetylcholine र corticosteroids को संश्लेषण मा कायापलट छ सेल चयापचय। Panthenol तर पनि अलिकति विरोधी-भडकाऊ प्रभाव छ। प्रयोग तर panthenol लागि निर्देश अब यो तर panthenol मा निर्देशन हेरौं, यो प्रयोग गर्दा सावधान आवश्यकता भन्ने दबाइ हो। : जस्तै समस्या लागि निर्धारित Pantenol छाला गर्न क्षति (घाउ, खरोंच, abrasions);
फैशन स्कार्फ 2014
ध्यान को धेरै को कुनै पनि शैली र स्वरूपमा विस्तार र सामान गर्न भुक्तानी भन्ने तथ्यलाई भरेको फैशन हाल मौसम,। सुन्दर र सुरिलो सामान बिना, पनि सबैभन्दा स्टाइलिश नजर अधूरा देखिन्छ। त्यसैले सुन्दर बेल्ट, बस निषेध झोला वा रूमाल आज बारेमा भूल। हामी महिला फैशन रूमाल 2014 जस्ता वस्तुहरू मा ध्यान यस लेखमा। दुपट्टा -। यो राम्रो सरल छ, तर कुनै पनि तरिकामा स्वाद थप्न सक्नुहुन्छ भन्ने नै समय, धेरै मूल सहायक मा स्कार्फ - फैशन 2014 फैशन यस वर्ष, घाँटी र टाउको मा महिला स्कार्फ लगाउने गर्न प्रदान गर्दछ। कम अक्सर तिनीहरूले जूता, बैग, sleeves मा देख्न सकिन्छ। तर कुनै पनि मामला मा, एक रूमाल स्टाइलिश र उपयुक्त देखिन्छ। 2014 मा एक headscarf पहने, तपाईं जनता शैली मा एक सुन्दर चित्र बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि कुनै एक तपाईं स्टाइलिश रूमाल चश्मा र नङ थप्नेछ भने, simpleton सोच्छ -। नङ पलिश मेल गर्न headscarf एक पगडी रूपमा थकित सकिन्छ। यो सूर्य देखि रक्षा र हावा देखि यो रक्षा गर्न सक्छन् किनभने यो विकल्प उपयुक्त र गर्मी मा, र सुन्दर वसन्त हुनेछ। उहाँले आफ्नो कपाल लुकाउन गर्नुभयो भनेर एक सुन्दर धनु मा उनको टाउको मा एक रूमाल टाई। यो विकल्प स्कर्ट, कपडे र एउटै रंग योजना अन्य लुगा संग संयोजन, रोमांटिक शैली मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक रूमाल पहने, तपाईं एक टाई, स्टाइलिश रूमाल वा पट्टी अनुकरण गर्न सक्छन्। आफ्नो घाँटी वरिपरि एक रूमाल बांधन को तरिकामा को जन बीचमा, तपाईं सडक शैली प्रेम लागि, विद्यार्थीहरूको लागि, व्यापार महिला लागि उपयुक्त पाउन सक्छन्। रूमाल एक खेल्न कम-प्रोफाइल भूमिका को रूप मा उज्ज्वल उच्चारण, तर धेरै स्टाइलिश सहायक बन्न सक्छ। यो सबै तपाईं किन्न, र कसरी एक आधारभूत outfit संग मिल्नु छनौट गर्न रूमाल कस्तो निर्भर हुन्छ।
रोग डाह -। को साथी परिवर्तन गर्न वास्तविक वा संभावित क्षमता मा निरपेक्ष विश्वास को एक राज्य Policing र बदला लिन!
टमाटर, केही थाहा चिमोटे गर्न, र केही stepson के थाहा र टमाटर पात को आंशिक हटान संग भ्रमित pasynkovanie छैन कसरी। टमाटर चिमोटे र कसरी यो किन?